युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीति शुद्धीकरणका लागि युवालाई अवसर
Saturday, 05.30.2020, 03:25pm (GMT+5.5) Home Contact
राजनीति शुद्धीकरणका लागि युवालाई अवसर
Monday, 08.29.2011, 02:03pm (GMT+5.5)
मुलुक राजनीतिक रन्थमोलले ग्रस्त छ । सत्ता संघर्षको चरम खेलले अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वलाई झनै बढाइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि त्याग गर्नसक्ने कोही नेता उपस्थित हुन सकेका छैनन् । उनीहरू युवा पुस्तालाई अवसर नै दिन चाहिरहेका छैनन् । अवकाश लिने बेला बितिसक्दा पनि सत्ता स्वार्थको खेलमा ज्यान फालेर बुढा नेताहरूले युवाहरूको ऊर्जालाई मार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । उनीहरू राजनीतिक शद्धिीकरणका लागि युवालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यतै राख्दैनन् । सत्तास्वार्थको घनचक्करमा घुमिरहेका नेताहरूले मुलुकलाई न नयाँ दृष्टिकोण दिन सके, न त नयाँ बाटोबाट हिंडाउन नै सके । विगत तीन वर्षयता सत्ताको फन्को लगाइरहेका नेताहरूको चरित्रमा अहिलेसम्म कुनै सुधार छैन । बारम्बार एउटै फलाको हालेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पूच्छर ढुंग्रामा हाले पनि बांगाको बांगै’ भनेझैं जतिपटक जनतासामु माफी मागे पनि नेताहरूको चरित्रमा कुनै सुधारको संकेत छैन । यतिबेला आम जनतामा पुराना नेताहरूको सोच, संस्कार र व्यवहार पुरानो भैसकेकाले अब उनीहरूले सन्यास लिएर युवा वर्गलाई नेतृत्व सुम्पने बेला आइसकेको बताइरहेका छन् । यदि त्यसो हुँदैन भने युवा नेताहरूले राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध गरेर पार्टीभित्र विद्रोह गर्न तयार हुनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिमा थुप्रिएको फोहरको डुंगुर सफा गर्न युवा पुस्ताले नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्छ । आफूले गर्न नसकेपछि पाका नेताहरूले पनि काम गर्नसक्नेका लागि ठाउँ छाडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा बलवती हुनथालेको छ ।
बुढाले ठाउँ नदिए पनि मुलुकको राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रवेश विस्तारै बढ्न थालेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि युवाहरू पार्टी निर्देशनबाट बाहिर निस्केर समग्र मुलुकको हित गर्ने दिशातिर अग्रसर हुन अझै सकिरहेका छैनन् । संविधान निर्माण गर्ने गहन दायित्व बोकेको संविधानसभालाई सत्ता स्वार्थको माध्यम मात्र बनाइएकोमा धेरै युवा सभासद्हरूको चित्त दुखाइ छ तर उनीहरू आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई यो कुरा बताउन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर युवाहरू, जुनसुकै पार्टीका किन नहुन्, एकजुट भएर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर भए भने पनि पार्टीले नै अंकुश लगाउने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएकै विषय हो । युवाहरू संचार माध्यमा आफ्ना कुण्ठा ओकलिरहेका हुन्छन् । तर राष्ट्रहितका लागि सबै दलमा आवद्ध युवाहरू एकजुट हुने साइत अझै जुरेको छैन । यो पनि गम्भीर समस्या हो । मुलुक बनाउने एउटै सूत्र बनाएर हिंड्ने विभिन्न विचारधाराका युवाहरूको समूह अहिले मुलुकले खोजिरहेको छ ।
युवाहरूको जोस र होसको प्रसङ्ग आउँदा ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्रमाणित गरिदिनुभएको छ कि- युवाहरूले अवसर पाएमा छोटै समयमा सकारात्मक नतिजा दिने गरी काम गर्न सक्छन् भनेर । तर अझै पनि युवाहरूले आफूलाई राजनीतिक दलको सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर मुलुकको समग्र हितका लागि प्रयासको थालनी गर्दा कतै न कतैबाट अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसकारण युवा पुस्ता राजनीतिमा शक्तिशाली हुन सकिरहेका छैनन् । बुढाले ठाउँ नछोड्ने ठिटाहरू अधिकार खोस्न नसक्ने भएपछि मुलुक पुरानै सोच र संस्कारबाट पीडित बनिरहेको छ । गोकर्ण बिष्टले निराशाका काला बादलले घेराबन्दी गर्दैगएको नेपाली समाजमा जुनकिरीको काम गरेको छ । उहाँको सक्रियता भ्रष्टाचारमा डुबुल्की मार्न चाहनेहरूका लागि ठूलो सकसको विषय बनेको छ । त्यस्तै अन्य युवा सभासद्हरू पनि राजनीतिलाई पेशा नबनाएर सेवाको माध्यम मात्र बनाउन आफ्नो जीवन संचालनका लागि वैकल्पिक पेशा अपनाउन थालेका छन् । यो मुलुकका लागि सुखद् कुरा हो ।
युवाहरूको उपयोग राजनीतिक स्वार्थका लागि खुबै भयो । हरेक परिवर्तनका लागि युवाहरू नै निर्णायक भूमिकामा रहे । तर अवसर भने बुढाले नै पाए । ६० वर्ष नाघेकाहरूले अवकाश लिनुपर्नेमा लाजै नमानी सत्ताको खेलमा लागिरहे । राष्ट्रसेवा सुरक्षा तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई ५८ वर्षमा काम गर्न असमर्थ हुन्छ भनेर अवकाश दिने तर नेताहरू चार बीस नाघिसक्दा पनि योग्य नै ठहरिने ! भेन्टिलेटरमा रहँदा पनि नेतृत्व छाड्न नचाहने । यसले मुलुकको राजनीतिमा सक्रिय अहिलेका युवाहरूले आफ्नो क्षमता राष्ट्रको हितमा उपयोग नै गर्न नपाई पलायन हुनुपर्ने नियति कायमै छ । अर्कोतिर स्वयं युवाहरू आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सामूहिक रुपमा अग्रसर हुने प्रवृत्तिको विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूको भातृ, भगिनी संगठनमा आवद्ध भएर पार्टीका नेताहरूलाई सत्तामा पु¥याउने भूमिकामा मात्र युवा पुस्ता केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसै भएर युवा पुस्ता बुढाहरूको सत्तारोहण गर्ने खुड्किला भएका छन् । हरेक निर्णायक आन्दोलनमा युवा पुस्ताको माग र नाराहरूलाई दलका नेताहरूले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन्, तर उनीहरूको सत्ता आरोहणसंगै त्यो नारा ओझेलमा पर्दछ । यसमा गल्ती कसको ? युवाहरूको कि युवालाई परिचालन गर्ने नेतृत्वको ? यो अहम् सवालमा निकै छलफल चलेका छन्, विचार प्रवाह भएका छन् र विश्लेषण तथा टिप्पणीहरू पनि थुप्रै आएका छन् । तर परिस्थितिमा कुनै सुधार छैन । त्यसैले अहिले राजनीतिमा सक्रिय मात्र होइन स्वतन्त्र रुपमा राष्ट्रको चिन्तन गर्नेहरू युवाहरू पनि भ्रमित छन् ।
राजनीतिक चेतना नै मानिसको पहिलो आधारभूत चेतना भएको मान्ने हो भने अबको समय स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत व्यक्त गर्ने, निर्भयपूर्वक सहभागिताको वातावरण सिर्जना गर्ने र जनता चाहनालाई वस्तुनिष्ठ ढंगले विना राजनीतिक पूर्वाग्रह सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुपर्छ । शहर बजारमा बसेका पढेलेखेका, राजनीतिक रुपमा सक्रिय भएका र नेताहरूको अघिपछि फन्को मार्ने युवाहरूले मात्र अवसर पाउने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । क्षमता भएकाहरू जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा वा दलसंग आबद्ध भएका किन नहोउन् उनीहरूलाई विना पूर्वाग्रह अवसर दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रबल दावेदार डा. बाबुराम भट्टराईले ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सक्रियतालाई सम्मान गर्दै आगामी सरकारमा पनि उहाँलाई मन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्नुभयो । गोकर्ण बिष्ट सम्बद्ध एमालेले यो कुरा स्वीकार गर्न सक्ला ? अवश्य पनि त्यस्तो काम एमालेले गर्दैन किनभने बिष्टको कामले एमालेकै धेरै नेताहरूलाई पिरोलेको छ ।
सबै राजनीतिक दलहरूमा युवावर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक सिद्धान्त र आस्थाको लेप लगाएर शक्ति संचय गरिएको पाइन्छ । उनीहरूको काम समाज सुधारतिरभन्दा माउ पार्टीको राजनीतिक अस्तित्वसंग बढी सम्बन्धित रहेको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् । समग्रमा युवावर्गको नेतृत्व गर्ने र स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्ने शक्तिको जन्म नै हुन सकेको छैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै देशको समग्र विकासमा केन्द्रित हुने युवा शक्तिहरू एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समयको माग भए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । युवाहरू पनि विभाजित छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निराशाका बादलहरू हटाउने प्रयास भने नभएका होइनन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका युवा सभासद्हरू एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रलाई संकटबाट मुक्ति दिलाउन अग्रसर भैरहेका सुनिन्छ तर नेतृत्वले त्यसको सुनुवाई नै गर्दैन । उनीहरूमा युवाहरू अगाडि बढे हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको छ । राजनीतिक लाभहानीको खेलमा मात्र युवावर्गको परिचालन गर्न पल्केका नेताहरू आफ्नो वर्चश्वका लागि भने युवा शक्तिको दुहाई दिइरहेका छन् । यो उनीहरूको फटाइ मात्र हो । युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्नका लागि विभाजनको रेखा कोरिदिएर त्यसैमा खेल खेल्ने नेताहरूले युवावर्गलाई दिग्भ्रमित पारिदिएका छन् । यही विभाजन र दिग्भ्रमले मुलुकमा अशान्ति मच्चिएको छ । अपराधले संरक्षण पाएको छ र यसैको जाँतोमा मुलुकको भविष्य पिसिइरहेको छ ।
मुलुकका लागि श्रम गरेर आर्थिक उपार्जनको ढोका खोल्नुपर्ने युवाहरू मुलुकमा कामै नपाएर गास, बास र कपासको खोजीमा अरबको बालुवामा पसिना चुहाइरहेका छन् । ज्यानको पर्वाह नगरी इराक र अफगानिस्तान जस्ता युद्धग्रस्त मुलुकमा अवैध तरिकाले समेत पुगिरहेका छन् । यो समग्र नेपालको युवा शक्तिको मूल्यांकनको विषय हो । अर्कोतिर केही सीमित युवाहरू नेताको पछि लागेर आफ्नो भूमिका स्थापित गर्ने होडवाजीमा छन् । यिनै अवसरवादी युवाहरूले सिंगो युवा जमातको प्रतिनिधित्व गरिरहेको भ्रम उनीहरूले छर्ने गरेका छन् । मुलुकमा रहेको यो असमानता र अवसरवादको अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले नै पहल गर्नुपर्छ र त्यसको अगुवाई युवा नेताहरू, जो पदमा पुगेका छन् उनीहरूले गर्नुपर्छ । विभाजित र दिग्भ्रमित युवा शक्तिलाई सही बाटोमा ल्याउने र उनीहरूको जिम्मेवारी महसुस गराएर राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गराउने पहल युवा नेताहरूको काँधमा आएको छ । अर्कोतिर शान्ति र संविधान तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानसभाभित्र रहेका युवा नेताहरू एकजुट भएर आफ्नो र पराइको भन्ने भावना हटाएर एकै ठाउँमा उभिने हो भने नेताहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । भीरैमा पुगेको मुलुकलाई उद्धार गर्न सकिन्छ ।
युवाको दुहाई दिने, युवाको सामथ्र्य र क्षमताको गुणगान गाउनेहरू युवाशक्तिलाई नै विभाजित गरिरहेका छन् । सिद्धान्तका नाममा, आस्थाका नाममा, क्षेत्रका नाममा, जातिका नाममा, सम्प्रदायका नाममा र नेता विशेषका नाममा समेत युवाहरू विभाजित छन् । यसरी विभाजित कतिपय युवाहरूले हतियार उठाएका छन् । उनीहरू आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न हतियार उठाएको दावी गर्छन् । एकथरि हतियारले बिश्राम लिएको छोटै समयमा मुलुकमा अनेकथरि नाममा हतियार उठेका छन् । यस दिशातर्फ युवावर्गको ध्यान कत्तिको खिचिएको छ ? विश्लेषणकै विषय हो ।